सुजुकी विश्वकै प्रोफिटेबल कार कम्पनी बन्न सफल, पछारियो बिएमडब्लू
काठमाण्डौ । जापानको कार कम्पनी सुजुकी जर्मनीको बीएमडब्लूलाई पछार्दै विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रोफिटेबल कार कम्पनी बन्न सफल भएको छ । सुजुकीको प्रोफिट मार्जिन ११.८ प्रतिशतको उचाईमा पुगेको छ, जब कि बिएमडब्लूको प्रोफिट मार्जिन ११.४ प्रतिशतमा सीमित छ । रिपोर्टमा बताइएअनुसार सुजुकीलाई सबैभन्दा धेरै फाइदा भारतको मारुतीबाट भइरहेको छ ।...
नाडा र वाडाको अन्तरक्रिया
पोखरा । नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आफ्नो चौथो कार्यसमिति बैठक भदौ १ गते उपत्यकाबाहिर पोखरामा आयोजना गर्यो । पोखरामा उक्त बैठक आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेर अटोमोवाइल व्यवसायीको समस्याको विषयमा जानकारी लिने र समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्ने मुख्य लक्ष्य थियो । कार्यसमिति...
नयाँ अवतारमा मारुतीले उतार्दैछ आफ्ना तीन सफल कार
काठमाण्डौ । नेपालको चारपाङ्ग्रे सवारीको बजारको ठूलो हिस्सा ओगट्न सफल मारुती सुजुकीले आफ्नो पोर्टफोलियोमा मौजुदा कारहरुको नयाँ अवतार लगातार बजारमा उतारिरहेको छ । यो वर्षको फेब्रुअरीमा कम्पनीले नयाँ स्वीफ्टको लञ्च गरेको थियो, जसले दोश्रो पटक पनि उत्तिकै सफलता पायो । यसअघि कम्पनीको तर्फबाट नेक्स्ट जेनेरेसन डिजायरको लञ्च गरिएको थियो,...
हुण्डाईको इलाइट आइट्वान्टी नेपाली बजारमा, आकर्षक लुक्स र विशेषता
काठमाण्डौ । नेपालका लागि हुुण्डाई मोटर्सका आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टीनेन्टल प्रा.लि.ले हालसालै बहुप्रतिक्षित इलाइट आइट्वान्टी २०१८ फेसलिफ्ट बजारमा ल्याएको छ । हुण्डाईको सबैभन्दा रुचाइएको यो मोडलले आफ्नो फिचरहरुमा गरेको मुख्य अपग्रेड उल्लेखनीय छ, जसले ग्राहकको हरेक अपेक्षालाई पूर्ण गर्ने दाबी गरिएको छ । यो फेसलिफ्ट मोडल...
हुण्डाई गाडी किन्नेले पाए वल्र्डकपको फाइनल हेर्ने अवसर
काठमाण्डौ । हुण्डाई गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक डिलर लक्ष्मी इन्टरनेशनल प्रालिले संचालन गरेको रोड टू रसिया अन्तर्गत फिफा वल्र्ड कप २०१८ को फाइनल खेलका लागि टिकेट विजेताको घोषणा गरेको छ । काठमाण्डौको थापाथलीमा अवस्थित हुण्डाई सोरुममा लक्की ड्र कार्यक्रम गरी विजेता छनौट गरिएको हो । जसमा कन्ज्युमर आई नेपालका अध्यक्ष बिमला खनाल...
हुण्डाईको आई ट्वान्टी एक्टिभ फेसलिफ्ट नेपाली बजारमा, मूल्य ३३.९६ देखि ३७.९६ लाखसम्म
काठमाण्डौ । नेपालका लागि हुण्डाईको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टीनेन्टल प्रालिले हालै आइ ट्वान्टी एक्टिभ फेसलिफ्ट २०१८ लञ्च गरेको छ । गत मे महिनामा भारतमा लञ्च भएको यो मोडेल नेपालको बजारभरि बहुप्रतिक्षित थियो । नयाँ हुण्डाई आईट्वान्टी एक्टिभ छरितो बाहिरी आवरण र सहज भित्री डिजाइनको साथ आएको कम्पनीले जनाएको छ । आईट्वान्टी...
हंसराज हुलासचन्दले ल्यायो युरोग्रिप टायर
काठमाण्डौ । नेपालीे टायर बजारलाई लक्षित गरी हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा. लि. ले युरोग्रिप टायर नेपाली बजारमा ल्याएको छ । हंसराज हुलासचन्द बजाज दुई पाङ्ग्रे तथा तीन पाङ्ग्रे सवारीहरुका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता पनि रहेको छ। टायरको सम्पूर्ण रेञ्जको साथ, युरोग्रिप टायर बजाजको दुई पाङ्ग्रे तथा तीन पाङ्ग्रे सवारीको ओरिजिनल...
शक्ति गौचन बने सुजुकी स्वीफ्टको पहिलो प्रयोगकर्ता
काठमाण्डौ । सुजुकीका चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता तथा सीजी होल्डिङको अटोमोटिभ विभाग सीजी मोटोकर्पले आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आफ्नो प्रतिष्ठित ब्राण्ड स्विफ्टको तेस्रो संस्करणको मोडलको अनावरण गरेको छ । यस मोडेलको अनावरण संयुक्त रुपमा सीजी होल्डिङ्सका सभापति तथा प्रबन्धनिर्देशक अरुण चौधरी र...
सुजुकी स्वीफ्टको तेश्रो संस्करण नेपाली बजारमा, मूल्य २८ लाख ९९ हजार
काठमाण्डौ । सुजुकीका चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता तथा सीजी होल्डिङको अटोमोटिभ विभाग सीजी मोटोकर्पले स्वीफ्टको तेस्रो संस्करणको मोडल बजारमा ल्याएको छ। सीजी होल्डिङ्सका सभापति तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरी र राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी शक्ति गौचनले यो पछिल्लो मोडेलको अनावरण गरेका छन्। नयाँ...
त्रिशुलीमा यामाहाको नयाँ शोरुम
काठमाण्डौ । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले बिहीबारबाट नुवाकोटको त्रिशुलीस्थित बत्तारमा नयाँ डिलर सुरु गरेको छ । एमएडब्लुले त्रिशुली अटोमार्फत यस क्षेत्रका ग्राहकलाई ‘थ्रि एस’ (सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्टस्)को सुविधा सुरु गरेको हो । नुवाकोटमा बढ्दै गएको यामाहा मोटरसाइकल र...
काठमाण्डौ । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले आइतबार स्टाइलिस स्कुटर फेसिनो नयाँ आकर्षक कलरमा सार्वजनिक गरेको छ । अब ‘सपुरमोडेल स्कुटर’ ‘ग्ल्यामरस गोल्ड’ कलरमा समेत उपलब्ध हुनेछ । राजधानीमा आयोजित एक समारोहमा मिस नेपाल वल्र्ड २०१८ श्रृंखला खतिवडाले नयाँ कलरको फेसिनो...
सीजी मोटोकोर्पद्वारा ट्राफिक प्रहरीलाई क्लोजसर्किट क्यामरा हस्तान्तरण
काठमाण्डौ । सुजुकीका चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको आधिकारिक बिक्रेता तथा सीजी होल्डिङ्सको अटोमोटिभ विभाग, सीजी मोटोकोर्पले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अभियानअन्तर्गत ट्राफिक प्रहरी ललितपुरलाई क्लोज सर्किट क्यामरा हस्तान्तरण गरेको छ । सो क्यामरा ललितपुर ट्राफिक प्रहरीको मोबाइल सवारी साधनमा जडान गरिनेछ । १८० डिग्री कभरेज भएको सो...
तपाईसँग हुण्डाईको कार छ ? फिफा वल्र्डकपको फाइनल हेर्न रसिया जान पाउनसक्नुहुन्छ !
काठमाण्डौ । नेपालका लागि हुण्डाईको आधिकारिक डिलर लक्ष्मी इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले आफ्नो नयाँ योजना “रोड टु रसिया” को घोषणा गरेको छ । विश्वकै सबैभन्दा प्रख्यात र लोकप्रिय फुटबल प्रतियोगिता फिफा वल्र्ड कपलाई लक्षित गरेर हुण्डाईले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि यो अफर सार्वजनिक गरेको हो । समस्त हुण्डाई कार खरीद गरेकाहरुले हुण्डाई नेपालको...
बीकेटीको डिलर मिट सम्पन्न, नयाँ ओटीआर टायर सार्वजनिक
काठमाण्डौ । बीकेटी टायरको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता डेल्टा डिष्ट्रिब्युटर्सले डिलर मिट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । धुलिखेल लज रिसोर्टमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा बीकेटीको देशभरका डिलर प्रतिनिधिहरुले सहभागिता जनाएका थिए । उक्त अवसरमा कम्पनीले नयाँ टायर समेत सार्वजनिक गरेको छ । माइनिङ लगायतका औद्योगिक क्षेत्रमा...
आयो डिस्कभरको १२५ सीसीको नयाँ अवतार, मूल्य रु. १९२९००
काठमाण्डौ । नेपालको सर्वाधिक बिक्री हुने मोटरसाइकल ब्राण्ड बजाजको आधिकारिक बितरक हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले बजाज डिस्कभर१२५ सीसीकोे नयाँ अवतार नेपाली बजारमा ल्याएको छ । डिस्कभर १२५ सीसी यस विधामा बजारमा उपलब्ध अन्य बाइकहरुभन्दा हरेक प्रकारले पृथक छ । यो पृथक बाइकको लञ्च जनकपुरको जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा यही बैशाख १५...
एफएनसीसीआईका सबै सदस्यहरूलाई सक्दो सहयोग गर्न आग्रह
कामना सेवा बैंक र डा. सन्चो क्लिनिकबीच ‘स्वास्थ्य परामर्श’ सम्झौता
सनराइज बैंकद्वारा कोरोना कोषमा करिब ८० लाख रुपैयाँ सहयोग हस्तान्तरण